Afeef - Sabahionline.com
Afeefasho Xiriirinta ah
Xiriirinta Sabahionline.com lagu xiriirinayo mareego kale oo bannaanka ka ah dawladda Maraykanka, ama isticmaalka meherad, xafiis hawleed ama magacyo shirkadeed oo ku jira kobta waa wax loogu talaggalay in loogu sahlo isticmaalaha. Isticmaaliddaa kama dhigna tasdiiqin rasmi ah ama oggolaansho ay Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanku u samaysay mareegada rayidka ah, badeeco ama adeeg. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanku ma xukunto waxyaabaha lagu daabacayo oo aad ka heli kartid meelahaas. Xiriirradaa waxaa lagu bixiyaa iyadoo la eegayo ujeeddada qeexan ee kobtan. Dhamaan xiriirrada Sabahionline waannu soo dhaweyneynaa.
n la muujiyo maahee, xogta ku qoran mareegtan waa wax lahaansho guud ah, waana la sawiran karaa oo la qaybin karaa idan la’aan. Haddii aad xigataan isha asliga ah ee xogta waannu ku farxi doonnaa. Haddii ay xuquuq lahaansho ka muuqato sawir, garaafka, ama maaddooyin kale, oggolaanshaha in laga qaataa ishii asalka ahayd.
Afeefasho Qaamoobidda ah
Dedaal kasta ayaa loo samaynayaa in Sabahionline.com lagu qoro war sax ah oo dhamaystiran. Si kastaaba ha ahaatee, iyadoo la eegayo tirada dikumiintiyada aannu haysanno, oo inta badan waqti gaaban lagu soo daabaco, ma balan qaadi karro saxnaanshaha warka aannu bixinayno. Markii la eego dikumiintiyada iyo waraarka ku qoran mareegtan, Dawladda Maraykanka, Wasaaradda Gaashaandhigga iyo shaqaalahooda ama dadka ay qandaraaska siiyaan toona ma ballan qaadayaan toos iyo dadab toona in dikumiintiga ku qoran Sabahionline.com la iibsan karo ama ay ku habboon yihiin sideedaba wax fulin karaya arrin gaar ah. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanka iyo hayb kasta oo kale oo sharci ah oo wax ka geysatay diyaarinta iyo isku-duwidda Sabahionline.com ayaa waxay halkan ka caddaynayaan in aysan mas’uul ka ahayn oon loo raacan karin guud ahaan wixii qaan ah oo ka yimaada istcmaalka warka aan habboonayn, ama aan daw ahayn oo la siiyo dadka boggan soo booqanaya. Wasaaradda Gaashaandhigga iyo qandaraaslayaasheeda toona looma qabsan kari doono wixii hanti luntay ama cirib xumo kale ka yimaada istcmaalka aan habboonayn, ama aan daw ahayn ee ku soo baxa mareegtan. Xog ka qaadashada ama isticmaalka Sabahionline.com ayaa markiiba ku micnoobaya aqbalidda buuxda ee afeefta sare ee ku saabsan qaamaysnaanta.
Oraah ku Saabsan Asturraanta iyo Ammaanka
Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanku waxay istcmaashaa barnaamijyo sofweer “software” ah si ay u abuurto abla’ablayn kooban oo ku saabsan xogta loogu danaynta badan yahay iyo kan loogu danayn yar yahay,iyo si ay lo aqoonsado sida uu habku u shaqaynayo ama meelaha ay dhibtu ka jirto. Haddii aad dooratid in aad Sabahionline.com siisid xogtaada shaqsiga ah oo aad ku siisid farriin email ah, waxaannu u isticmaalaynaa keliya in aannu uga soo jawaabno emailkaga. Dano bogga amnigiisa ku saabsan awgood iyo in la xaqiijiyo in xogtani ay mid la heli karo ee ahaato dhamaan isticmaalayaasha, Wasaaradda Gaashaandhiggu waxay isticmaashaa barnaamijyo sofweer ah oo aqoonsanaya isku dayga aan idmanayn oo lagu doonayo in boggan xog lagu qoro ama wax looga beddelo ama si kale loogu geysto wax dhibaato ah. Xogtii lagu helo ilaalintani waxaa loo isticmaali kari doonaa baaritaanno idman oo ay sameeyaan hay’adaha xoojinta sharciga. Isku dayga aan idmanayn oo lagu doonayo in lagu qoro ama xog looga beddelo adeeggan waa mid si adag mamnuuc u ah, waxaana ay ciqaabtiisu noqon kartaa Sharciga Maraykanka Khiyaanada Kombiyuutarrada ee 1986 iyo Cinwaanka Sharci ee 18 U.S.C. Sec. 1001 iyo 1030. Marka laga reebo ujeeddooyinka sare ku xusan, isku day kale ma jiro oo aannu u samayno in aannu ku aqoonsanno isticmaalayaasha shaqsiyaadka ah iyo hab-isticmaaleedkooda toona.
Boggani wuxuu isticmaali karaa kuukiyo “cookies” si uu u sahlo fahamka isticmaalidda boggan, hagaajinta waxyaabaha ku qoran, iyo/ama in aad shaqsiyayso khibraddaada ku saabsan boggan. Kuuki waa fayl qoraal oo yar oo laga diri karo kumbiyuutarka mareegta loona diri karo eegahaaga internetka si uu u kaysdho door-bidyadaada. Kuukiyadu badiyaa waxaa ku jira aqoonsade aan magac lahayn oo khaas ah, laakiin, iyaga keli ahaantood, ma fashilayaan cinwaanka iimaylkaaga ama waxyaabaha sida shaqsiga ah laguugu aqoonsan karo, haddii aadan adigu dooran in aad si gaar ah u bixisdo xogtaada.
Haddii ay doorbidyadaada asturraantu oggolaanayaan mareegtani waxay kuuki dhigan kartaa meesha aad ka eeganaysid internetka waxaanay baaran kartaa kuukigaa. Haddii aad doorato in aadan nala wadaagin xogtaada aan shaqsiga ahayn oo ujeeddooyinkaa ku tacalluqa, waxaad doorbididdaada asturraanta ka beddeli kartaa meesha aad ka dheehato internetka. Waxaad dheehdahaaga u oggolaan kartaa qaar ka mid ah kuukiyada, waxaad dalban kartaa oggolaanshahaaga intaan kuuki la soo dhigin dheehadkaaga, ama waadba awdi kartaa kuuki oo dhan dhamaantii. Maadaama uu habraaca beddelidda doorbididdaada asturraantu ee dheehde kasta oo internetka ahi uu kala duwan yahay, waxaannu ku talinaynaa in aad dib u eegtid “Help” ama “Tools” oo ku yaalla doorashada guud ee diilinta tuul baar “tool bar.” Haddii aad u baahan tahay xog dheeraad ah ama aad qabtid wax su’aalo ah ama faallo ah oo ku saabsan xogta halkan lagu bixiyey, fadlan iimayl u soo dir maareeyayaasha xogta ee mareegtan, halkanna kala soo xiriir [email protected]